Truth be known: တွန်းနေကြမယ့်သူတွေ
Posted by generation96 at 9:39 AM
ကောင်းတယ်ဗျာ…ကျွန်တော်လည်းစတန့် ထွင်ပြီးမတင်တာမဟုတ်ဖူးဗျ။ အဲဒီနေ့ က ကိုသက်ဝင်းအောင် သတင်းဖတ်ပြီး အတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကလူတွေ အချိန်မတန်ခင်ွတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်လွင့် သွားတာသိလိုက်ရတိုင်း ရင်မှာခံရခက်တယ်ဗျာ။ သူတို့ တွေက ကျွန်တော်တို့ တွေရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ ကိုမင်းကိုနိူင် ကျန်းကျန်းမာမာ နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက်ဆက်လက် အလုပ်တွေအများကြီး လုပ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
သဘောပေါက်ပါတယ် ကိုစိန်မျောက်မျောက်ရေ။ ကျနော်လည်း ကိုသက်ဝင်းအောင် အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ blog ပေါ်မတင်ဖြစ်ပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ရှိပါတယ်။ 7monkeys မှာ contribute လုပ်ဖို့ ကျနော် ပြောထားပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါလေးလည်း လမ်းကြုံရင် guide လုပ်ပါအုံး။ ကျေးဇူးပါဗျာ။
၀ိုင်းတွန်းနေတဲ့တခြား Blog တွေ ရှိသေးတယ်ဂျ။ ရှာဖွေ စုဆောင်းပေးပါဦးလို့။
I've done the part for Ko Minn Ko Naing birthday as well.. although it's small, it is done with my heart.. happy birthday KMKN!
1:14 AM, October 23, 2006
အဲဒီနေ့က အိမ်မှာပဲ သူ့အတွက် ဆွမ်းတင်ပွဲလုပ်ပေးပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ သွားလှူပေးဖြစ်တယ်… လုံးဝ မအားတာနဲ့ ဘလော့ခ်ပေါ်တော့ တက်မရေးဖြစ်ဘူး …. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုသိရတာ ၀မ်းသာရပါတယ်.. အားလုံးဆုတောင်းသံတွေအတွက်ပေါ့….
Hi Ko Generation96, Can you remove all the blogger's links, and associated mentionings within this post? As your blog is very political, we are afraid of the consequences. We have already voiced our feelings in the blogs so I think that is quite fair and enough. (It is even more than enough compared to more than 100 of silent Myanmar bloggers). We know you are doing good but we can't afford or risks the danger as most of us are blogging with real identities and real names, Not using pseudonyms.
We also think this is end October so the post has already served its intention to wish Ko Min Ko Naing's birthday. Many people has already read this post. So its better not to archive it as it includes many non-political citizen bloggers.
3:26 AM, October 31, 2006
Ohhhhh.... i didn't request to delete my link. pls do not remove. i appreciate it.
12:08 PM, November 05, 2006